Knowledge Archives - KSM Global
ဒီ၂ဝဝ ကျပ်ကို သေသေချာချာ သိမ်းထားတာ ၆ နှစ်ကျော်ပါပြီ။
June 25, 2022 adminLeaveaComment on ဒီ၂ဝဝ ကျပ်ကို သေသေချာချာ သိမ်းထားတာ ၆ နှစ်ကျော်ပါပြီ။
ကျွန်တော် အရမ်းပျင်းရိတဲ့အခါ၊ အဆင်မပြေမှု၊ အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီ ၂၀၀ ကျပ်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ခွန်အားတွေ ပြန်ပြည့်လာတယ်လို့ အမြဲခံစားရပါတယ်။ ဒီ ၂၀၀ ကျပ်ကို တန်ခိုးရှိတဲ့ ဆရာ၊ ဘုန်းကြီးတွေ ပေးထားလို့ သိမ်းထားခြင်းလည်း မဟုတ်သလို ကျွန်တော်က အယူသီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သိမ်းထားခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကန်ဘောင်မှာ တစ်ပတ် တစ်ခေါက် ပုံမှန်ရောက်ဖြစ်တယ်။ ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ သီချင်းတွေ ဆိုဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ဘီယာ သောက်ရင်းနဲ့ စကားတွေပြော ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကြုံရင် ကြုံသလို ဈေးလိုက်ရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည်တွေဆီက မုန့်၊ ရေသန့်ဗူးတွေ ဝယ်ရင်း သူတို့နဲ့ စကားတွေလည်း ခဏခဏ ပြောဖြစ်တယ်။ တချို့နဲ့ဆို ရင်နှီးခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ […]
June 25, 2022 adminLeaveaComment on ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို အရှုံးပေးလိုက်ရသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင့်ဘက်တန်
ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျာ့ ဖဆပလအဖွဲ့ကြီး မြေပေါ်ရောက်စအချိန်၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ပြန်အုပ်ချုပ်ချိန်ပေါ့ဗျာ။ ဖဆပလနဲ့ ကက်ဘိနက်အစိုးရနောင်ဂျိန်ချနေ တုန်းဆိုပါတော့။ အဲဒီအချိန်မှာ အိန္ဒိယ ဘုရင်ခံချုပ် လော့ဒ်လူဝီမောင့်ဘက်တန် မြန်မာပြည်ကို လာတယ်ဗျာ။ ဒီတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မဟာမိတ်တပ်သားတွေ စုပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့”အိစ်အင်ဝက်စ်ကလပ်”က ကန်တော်မိတ် သဘင် (ယခုအိုရီယင့်ကလပ်) မှာ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတခု တည်ခင်းတယ်ခင်ဗျာ့။ “အဲဒီညစာစားပွဲမှာ ဖဆပလခေါင်းဆောင်ပိုင်း လေးငါးဆယ်ယောက်ကို ဖိတ်တယ်ခင်ဗျ။ မလွှဲသာလို့ ဖိတ်ရသလားမသိ ပါဘူးဗျာ။ ပေးထားတဲ့ နေရာတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတောင်မှ ချောင် ထဲ နောက်ဆုံးတန်းမှာ နေရာပေးထားတယ်။ အဲဒီထမင်းစားပွဲအပြီးမှာ အင်္ဂလိပ် ထုံးစံအတိုင်း ဂုဏ်ပြုစကား ထပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ “အဲဒီအခါတုန်းက ရေပန်းစားနေတဲ့ ဆာပေါ်ထွန်း တို့၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါတို့ပေါ့ဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုတော့ စကားပြောရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ စာရင်းမှာ ထည့်မထားဘူးဗျာ။ အဲဒီလိုစကား ပြောဆိုကြပြီး […]
June 25, 2022 adminLeaveaComment on လူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးလျှင် ငှက်ပျောတုန်းထည့်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းအမှန်
ငှက်ပျောတုန်းထည့်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်onile ပေါ်မှာ အသက်၈၇ နှစ်အပျိူ ကြီး အခေါင်းထဲငှက်ပျောတုန်းထည့်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ထည့်ရတဲ့အနှစ်အစစ်ကို ပြောချင်လို့ပါလူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးခြင်းနှင့် ငှက်ပျောတုံး မည်သို့ ပတ်သတ်ပါသနည်း ..? အားလုံးလိုလို ပြောဆိုစနောက်နေကြတဲ့ ဟာသစကားလေး တစ်ခွန်းကသေရင် ငှက်ပျောတုံးဖက်နေရမယ် နော် ဆိုတဲ့ကျီစယ်မှုလေးကြောင့် တစ်ယောက်စ တစ်ရာဆိုသလို တစ်ယောက်က စလို့ သူစ ကိုယ်စနဲ့ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေအတွက်ငှက်ပျောတုံးက စ,စရာတစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့တာထင်ပါတယ် ။ သာမာန်အမြင်အယူအစအနေနဲ့ ငှက်ပျောတုံးကပဲ သေသူအတွက် အဖော်ဖြစ်စေသလိုလို ၊ ဒီဘဝ အိမ်ထောင် မကျပဲသေသွားရလို့နောက်နောင်ဘဝတွေ အတွက်အိမ်ထောင်ကျအောင်ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်သဘောနဲ့ ယတြာချေတာလိုလို ဒီလိုပဲ ထင်မြင်နေကြတာပါ ။ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီနေ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေတဲ့ သေဆုံးသူနဲ့ အဖြစ်နဲ့ တင်ထားကြတာ တွေ့ရပြီးတချို့ကလည်း လက်ခံစရာမရှိကြောင်း ရေးတင်ထားကြတာ […]
ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုသူများ ဒီနည်းလမ်း (၅) ခုကို အသုံးပြုကြည့်ပါ
June 24, 2022 adminLeaveaComment on ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုသူများ ဒီနည်းလမ်း (၅) ခုကို အသုံးပြုကြည့်ပါ
တန်ဖိုး ရှိလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ။ စီးပွားရေး, အောင်မြင်ရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေအားလုံးက သင်ရှာနိုင်တာထက် လျှော့ပြီးသုံးဖို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အသုံးစရိတ်က ဝင်ငွေထက် နည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားဖူးနေတာ မှန်ပေမယ့် သေချာနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်…။ ဝင်ငွေထက် နည်းတဲ့ အသုံးစရိတ်နဲ့ ဘယ်လိုနေနိုင်မလဲဆိုတာကိုရော ကြိုးစားကြည့်ဖူးပါသလား။အများစုအတွက်တော့ ဝင်ငွေထက် လျော့နည်းတဲ့အသုံးစရိတ်နဲ့ နေထိုင်ဖို့က ပြောသလောက် မလွယ်ပါဘူး အိမ်ငှားခတွေ၊ မီတာခ၊ ရေဖိုး၊ စားသောက်စရိတ်၊ လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်၊ လမ်းစရိတ်စသဖြင့် ငွေထွက်ပေါက်တွေက အများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ လစာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ လိုချင်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို မရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ အဆင်အခြင်မဲ့ လျှောက်သုံးရင်းကနေ ငွေကြေးအတွက် စိတ်ဖိစီးပူပန်မှုတွေ ကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ရှာနိုင်တာထက် နည်းတဲ့အသုံစရိတ်နဲ့ နေနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းအချို့ကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်နော်…။ ၁။ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်ပါအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတာ၊ […]
June 24, 2022 adminLeaveaComment on ဘီလီယံနာသူဌေးတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကိုးဂဏန်းသမားများ
ဘီလီယံနာသူဌေးတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကိုးဂဏန်းသမားများမည်သည့်နှစ် မည်သည့်လမှာမဆို အင်္ဂလိပ်လို9ရက် 18 ရက် 27 ရက်နေ့မှာမွေးဖွားသူတွေဟာ9ဂဏန်းသမားများဖြစ်ကြပါတယ်9 ဂဏန်းသမားတွေဟာ သူများပေးတဲ့ငွေ တစ်ဆယ်ထက် ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ငွေ တစ်ကျပ် ကို ပိုမက်တယ် ဘယ်ကိစ္စ တွေမှာမဆို ကွယ်ရာမှာတစ်မျိုးရှေ့တစ်မျိုးမလုပ်တတ်ဘူး အဲဒါကြောင့် ဘဝမှာရန်သူတွေများနေတတ်တယ် တွဲလို့ရရင်တွဲ တွဲလို့မရရင်ကွဲ အဲလိုပြတ်ပြတ်သားသားရှိတာ9ဂဏန်းသမားတွေပဲသူတို့ဟာ မကြာခဏလောကကြီးကို စိတ်ကုန်နေတတ်တယ် ဒါပေမယ့် စိတ်တာကုန်နေတာ9ဂဏန်းသမားတွေထဲက ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတဲ့သူ သီလရှင်ဝတ်သွားတဲ့သူအင်မတန်နည်းတယ်9ဂဏန်းသမားတွေက ဘဝမှာ ရန်သူ အတိုက်အခံ ဘယ်လောက်များများ နောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်တတ်တယ် သူတို့ကမသိကြလို့ ၉ဂဏန်းသမားတွေဟာကြီးပွားချမ်းသာစေမယ့် ဓာတ်တစ်မျိုး မွေးရာပါ အနေနဲ့ပါလာတတ်ကြတယ်9 ဂဏန်းသမားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ် မဖြစ်ရင်လည်းအရှင်းပဲဖြစ်ပြီဆို ကူစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်အပူလောင်တာလည်းမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆေး အကောင်းဆုံးဓါတ် စာကတော့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ […]
June 24, 2022 adminLeaveaComment on ဘယ်ဟာလဲ ဆင်းရဲသား.. ဘယ်ဟာလဲ လူချမ်းသာ…..(ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်)
ဘယ်ဟာလဲ ဆင်းရဲသား.. ဘယ်ဟာလဲ လူချမ်းသာ….ဘယ်ဟာလဲ ပညာတတ်…ဘယ်ဟာလဲ သူတောင်းစား…..အဲ့မှာ ရွေးကြည့်ပါအုံး ရွေးလေ ချမ်းသာလို့လည်းမာန်မတက်နဲ့……ဟန်ချက်ပျက်ရင် မွဲတက်တယ် နုပျိုလို့လည်း မာန်မတက်နဲ့…….အိုတဲ့အခါ သိလိမ့်မယ် ကျန်းမာလို့လည်း မာန်မတက်နဲ့….နာတဲ့အခါသိလိမ့်မယ် ချမ်းသာဆင်းရဲ အလွှာကွဲလည်း…….တစ်နေ့ သေရမှာမလွဲ တလွဲမာန ထောင်လွှားစိတ်နဲ့…..အသက်ရှင်ခိုက် မိုက်ခဲ့ကြလျင်…..သေလျင် ငရဲ ဆင်းသက်မြဲမို့….ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာ သိရမှာက….ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ မသေခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါ…….
June 24, 2022 adminLeaveaComment on (၂၃)နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့ ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ
သမီးလေးက အသက်မှ ၂၃ နှစ်ရှိသေး။ကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။အမေလုပ်သူဒေါသအကြီးကြီး ထွက်ရပြီ။ ကောင်မ အဲ့ဒါ ဘယ်နွားလက်ချက်လဲအခုဖုန်းဆက်စမ်း အဲ့ကောင်ကို ကောင်မလေး ဖုန်းဆက်တယ်။နာရီဝက်လောက်ကြာတော့သူတို့အိမ်ရှေ့ကို Rolls-Royce တစ်စီးဆိုက်လာတယ်။ သားသားနားနားဝတ်စားထားတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ်။သူ ပြောတယ်။ မရည်ရွယ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့် ကျနော် သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့် သူ သမီးလေးမွေးခဲ့ရင်ကုန်တိုက်ကြီး ၂ ခု၊ ဥယဉ်အိမ်ရာ၂ ခုနဲ့ ဒေါ်လာ ၂ သန်း ပေးပါ့မယ် သားလေးမွေးရင်တော့ စက်ရုံ ၂ ရုံနဲ့ဒေါ်လာ ၅ သန်း ပေးပါ့မယ်ဒီလို ကျနော် တွေးထားပါတယ် တကယ်လို့ ကေလး ပျက်ကျသွားရင်တော့ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲဆိုတာကျနော်မသိသေးဘူး ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ငါ့ညီမကြီး ပြောကြည့်လေ အမေလုပ်သူက ..ကမန်းကတန်း ပြန်ဖြေတယ်။ မတော်လို့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားရင်လည်းနောက်တစ်ကြိမ် ..ထပ်ကြိုးစားပေးပါလားဟင်တဲ့ သေဇမ်း […]
June 24, 2022 adminLeaveaComment on “သင့်မွေးရက်က ပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/ သင့်ချစ်သူအကြောင်း”1ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့
သင်ဟာ…1ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်.. သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွ ရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဉာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူတယောက် ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာ ဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတယောက်လိုပါပဲ… 2ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ်တယ်။ သင့်ကို အမြဲဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ပါရမီပါသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို မမေ့နိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဒွေ ဖန်တီးပေးမယ့်သူတယောက်ပါပဲ။ 3ရက်နေ့ မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တယ်။ ဆရာကြီး လုပ်ရမှာကျေနပ်ပြီး အမှားလုပ်မိရင်လည်း တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ သင့်အတွက်ဆို အခက်အခဲတွေကို တူတူဖြတ်ကျော်မယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်း တယောက်ပါပဲ.။ 4ရက်နေ့ မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ စိတ်နေသဘောထားကြီးတယ်။ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ရမှ […]
တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်းခံရပါတယ်။ သင့်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာလေးတွေကို သင်အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မမြင်ရတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံရသူပါ (၁) ငှက်မွှေးလေးကျလာတယ် တကယ်လို့သင့်အနားလေးမှာ ငှက်မွှေးလေးဝဲနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အပေါ်လေးကိုကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘေးမှာ သူတို့အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်လို့ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာသင့်ကို ချစ်ခင်တယ်၊ မစတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သမရိုးကျနေရာတွေမဟုတ်တဲ့ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းလိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာ တွေ့ရင်တော့ ပိုလို့တောင်သေချာပါတယ်။ (၂) ၁၁း၁၁ နာရီ ၁၁း၁၁ နာရီကို မကြာခဏတွေ့ဖူးလား။ ဒါဟာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂဏန်းလေးကိုတွေ့ပြီဆိုရင် သင်ကံကောင်းတော့မယ်ဆိုတာ […]
June 23, 2022 adminLeaveaComment on ဒါတွေကို တကယ်လုပ်ပါ….မင်းတစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရဘူး
တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေ တကယ်လုပ်ပါ ။ (၁) အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွတဲ့ အလုပ်မရွေးပါနဲ့ ။ (၂) ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်းတဲ့ ရသမျှကို အကုန်မသုံးပါနဲ့ စုနိုင်သမျှ စုပါ ။ (၃) အချိန်ဟူသည် အဖိုးတန်ဆုံးသော အရင်းအနှီးတဲ့ အချိန်ကို မဖြုန်းပါနဲ့ ။ အကြိုးရှိစွာ အသုံးချပါ ။ (၄) ကျမ်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီး တစ်ပါးတဲ့ ကျမ်းမာရေးကို ဂရုစိုတ် ပါ ။ ကျန်းမာမှ လည်း အလုပ်လုပ် နိုင်မှာပါ ။ ၅) ဝါသနာကို အရင်းခံပြီး အလုပ် လုပ်ပါတဲ့ မိမိဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်သည်သာလျှင် မိမိအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ် ။ (၆) အနားယူရင်း […]